IWOC Prisoners Solidarity with Workers in Myanmar
Incarcerated Workers Organising Committee (IWOC) isacollective of incarcerated Industrial Workers of the World (IWW) members who organise around prison and class struggle issues from inside prison. This call also aims to beasolidarity call to all activists and trade unionists imprisoned in Myanmar for fighting back the military regime
Members of the Incarcerated Workers Organising Committee (IWOC) have issuedamessage of international solidarity with workers in Myanmar and the Blood Money Campaign.
"We send love and solidarity to the people of Myanmar, including the thousands imprisoned and those whose loved ones have been killed by the dictatorship. "Your brave resistance against ruthless repression and unimaginable atrocities is an inspiration to all those who aspire forabetter world and whilst our own imprisonment limits the range of actions open to us, we are committed to standing with you in whatever way we can.
"We intend to educate those within our reach about the ‘Blood Money Campaign’ making our families, friends and fellow prisoners aware of the actions that workers in Myanmar are undertaking. We aim to highlight the role of multinational corporations play in proving direct and indirect support to the military dictatorship.
"We will echo your calls for all those companies doing business with the regime to divest immediately and end their association with the suppression of freedom and justice.
"We hope we can aid you in your struggle and in our own small way pierce the veil of normalisation the dictatorship wishes to present to the world."
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလုပ်သားများကော်မတီ (Incarcerated Workers Organising Committee (IWOC)) မြန်မာအလုပ်သမားထုနှင့် အတူတကွ ရပ်တည်
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံ အလုပ်သမားများကော်မတီ (IWOC)သည် အဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသော ကမ္ဘာ့စက်မှု အလုပ်သမားများအဖွဲ့(IWW)၏ အဖွဲ့ဝင်များအစုအဝေးဖြစ်သည်။
အဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသော ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ့ဝင်များသည် အကျဥ်းထောင်များအတွင်းတွင် အကျဥ်းထောင်နှင့် လူတန်းစားပဋိပက္ခဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအရေး ဆောင်ရွက်နေကြသူများဖြစ်သည်။ ယခုတောင်းဆိုမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်အား တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း မတရားဖမ်းဆီး အကျဥ်းကျခံနေရသော တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊
အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူတကွ ရပ်တည်ကြောင်းပြသသော တောင်းဆိုမှုတစ်ရပ်လည်းဖြစ်သည်။
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံအလုပ်သမားများကော်မတီ(IWOC) အဖွဲ့ဝင်များသည် မြန်မာပြည်တွင်းရှိအလုပ်သမားများ၊ "Blood Money Campign" သွေးစွန်းငွေကန်ပိန်းတို့နှင့် အတူတကွရပ်တည်ကြောင်းကိုပြသည့်အနေဖြင့် သတင်းစကားတစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ(၂၇)ရက် အစောပိုင်းတွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး မရှေးမနှောင်းမှာပင် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံနှင့် စကော့တလန်နိုင်ငံများတွင်လည်း အတူတကွရပ်တည်ကြောင်း ပြသသည့် ဆန္ဒပြပွဲများကျင်းပခဲ့သည်။
"အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်၏လက်ချက်ကြောင့် ကျဆုံးကြွေလွင့်ခဲ့ရသော အာဇာနည်များ၏မိသားစုဝင်များနှင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသောသူများအပါအဝင် မြန်မာပြည်သူအားလုံးနှင့်အတူတကွရပ်တည်ပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာများပို့သလျက်ရှိပါတယ်။
"ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ဖိနှိပ်မှုများနှင့် မျှော်မှန်း၍မရအောင်ပင် ပြင်းထန်သောအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်မှုများကို ပြည်သူတွေရဲ့ ရဲရင့်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်တွန်းလှန်မှုတွေက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကမ္ဘာသစ်ကို မျှော်လင့်ထားတဲ့သူတွေ အတွက် အားဖြစ်ရပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်၌ အကျဥ်းချခံထားရသောကြောင့် ကျွန်ပ်တို့လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သော အတိုင်းအတာသည် အကန့်အသတ်နှင့်ဖြစ်သော်လည်း
ရသမျှနည်းလမ်းများဖြင့် သင်တို့နှင့်အတူအတွ ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြုအပ်ပါတယ်။
" ကျွန်ုပ်တို့ လက်လှမ်းမီသောသူများအား Blood Money Campign သွေးစွန်းငွေ ကန်ပိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပညာပေးရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိသားစုဝင်များ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနှင့် အတူတကွအကျဥ်းကျခံနေရသူများကို မြန်မာပြည်တွင်း အလုပ်သမားထု ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သိရှိကြစေဖို့ ဖြစ်တယ်။ စစ်အာဏာရှင်အားတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ အထောက်အပံ့ပေးနေကြတဲ့ နိုင်ငံစုံ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကိုပိုမိုပြီး လူအများသိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
"ကျွန်န်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင်တို့တောင်းဆိုသကဲ့သို့ ထိုကုမ္ပဏီကြီးများအား မြန်မာစစ်တပ်နှင့် စီးပွားရေးအကျိုးတူဆောင်ရွက်နေမှုများအား ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပစ်ရန်၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် တရားမျှတမှုအပေါ် အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်နေသူများနံါ ပတ်သက်ဆက်စပ်နေမှုအား အဆုံးသတ်ရန် အတူတကွတောင်းဆိုလိုက်သည်။
"ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင်တို့၏ ကြိုးပမ်းရုန်းကန်မှုများအား ကူညီပေးနေမည်ဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်မှကမ္ဘာသို့ပြသလိုသော ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မှု အတုအယောင်ပုံရိပ်လွှာကို ကျွန်န်ုပ်တို့နည်း၊ ကျွန်န်ုပ်တို့ဟန်ဖြင့် ဆန့်ကျင်သွားမည်ဖြစ်သည်။